Lahatenin'i Kolo Roger Christophe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lahatenin’Andriamatoa Kolo Roger Christophe,Praiminisitra, nandritra ny lanonana fifampiarahabana tratry ny taona 2015, Lapam-panjakana, Iavoloha, faha 09 Janoary 2015.
Ny arahaba atolotro anao Andriamatoa Filoha, amin’ny anarako manokana sy ny ankohonako, amin’ny anaran’ireo mpikambana vavy, lahy ato amin’ny Governemanta, dia arahaba toa an-dRamasoandro, satria tokoa Masoandro sy Hery Vaovao ho an’ny Malagasy tsivakivolo ianao; ka mizara ny tara-pahazavany amin’isam-baravarana amin’ny marain-dohataona, ary mandoko ny faravodilanitra amin’ilay takariva mahatsara vahiny.
Arahaba manao ny soa hosoavina ianao, arahaba manao ny tsara ho tsaroana.
Manolotra fiarahabana manokana ihany koa an-dRamatoa vadinao,
Indreo ianareo filohan’ny Andrim-panjakana, ati-doha miaramikaona hiadanan’ny ambanilanitra. Hikapa hahita ny tonony anie ianareo, handidy hahita ny vaniny.
Mankasitraka, mankatelina anareo Minisitra isanisany.
Miarahaba anareo isanisany Solombavam-bahoaka avy amin’ny lafy valon’ny Nosy.
Chers amis du Corps Diplomatique, du Système des Nations-Unies et des Institutions internationales ici présents, je tiens à vous présenter mes cordiales salutations.
Rehefa nomenao anay ny vina, tamin’ny alalalan’ny politika ankapoben’ny fanjakana norafetinao dia nazava taminay ny lalan-kaleha. Niroso tamin’ny fametrahana an’i Madagasikara ho firenena miarin-doha sy mandroso isika.
Vita ny drafitra nasiônaly momba ny fampandrosoana na ny “Plan National de Développement”. Voafaritra sy misongadina anatin’izany, Andriamatoa Filoha, ny asa amehana aminao na ny “Programme d’Urgence Présidentiel” (PUP).
 Nisy tokoa ny dingana vita nandritra iny taona efatra ambinifolo sy roarivo iny.
Teo aloha ny ezaka tamin’ny famerenana sy fanamafisana ny fifandraisan-tsika amin’ny any ivelany dia ireo mpiara miombon’antoka sy mpampiasa vola vahiny izany ;
Teo ny ezaka amin’ny fampivoarana sy ny fiarovana ny Zon’olombelona;
Nisy ihany koa ireo asa natao ho fametrahana ny Fanjakana tsara tantana sy tan-dalàna;
Maro ny fepetra noraisina mahakasika ny toe-karena sy ny fampandrosoana ankapobeny;
Tsy natao ambaninjavatra ihany koa anefa ny lafiny sosialy mba hisian’ny rariny sy ny hitsiny eny anivon’ny fiarahamonina izay endrika iray ny fampiahavam-pirenena izay imasonao.
Nohon’ny fiverenan’i Madagasikara amin’ny ara-dalàna taorin’ny fifidianana nankatoavin’ny rehetra, ary koa noho ny ezaka ara-diplômatika azo tsapain-tanàna nataonao, Andriamatoa Filoha, dia neken’izao tontolo izao ny Fanjakana Malagasy.
Ary dia efa mahazo tombony ara-toe-karena amin’izany sahady isika indrindra ny mpandrahara Malagasy raha tsy hilaza afa tsy ny “Accord de Partenariat Economique” (APE) iarahana amin’ny Vondrona Eoropeanina, ny AGOA sy ny COMESA isika.
Miverina miandalana ireo fanampiana mivantana ny tetibolam-panjakantsika. Vita ny fanaovan-tsonia maro mahakasika izany toy ny niarahantsika tamin’ny UE, BAD, FMI, AFD, Japon.
Horaketin’ny tantara ny handraisantsika ny fivoriam-ben’ny firenena miteny frantsay eto Antananarivo amin’ny taona ho avy ary hiomana amin’izany isika satria tokoa mantsy ny valala tsy in-droa mandry am-bavahady.
Nandritra ny fampisehoana ny “Tatitra faharoa momba ny zon’olombelona” nataontsika tany Genève farany dia niaiky ny Filankevitry ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona fa tontosantsika ny roa ampahatelon’ireo tolo-kevitra neken’i Madagasikara.
Voarafitra sy nolaniana ny lalàna mametraka ny Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny zon'olombelona na “Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme”. Ho vaindohan-draharahantsika ny fiarovana sy ny fanajana ny zon’olombelona, ka hotoizana ny ezaka efa vita sy efa natomboka.
 Ny didim-panjakana ho fampiharana ny lalàna mikasika ny “Dina” sy ny hetsika “coup d'arrêt” voalohany sy faharoa dia nahafahana namerina ny fitoniana teo anivon’ny fiarahamonina indrindra tany Atsimo.
Nojerena manokana ny fiarovana ny olona sy ny fananany na ny an-tanàn-dehibe na ny eny ambanivohitra indrindra ireo toeram-pizahan-tany.
Nihezaka hatrany isika amin’ny ady amin’ny kolikoly.
Tsy avelantsika ho toy ny endim-boanjo izany ka ny madinika ihany no ho may. Navaozintsika ny Birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly (BIANCO) ary eo ampandrafetana ny paik’ady mandritry ny folo taona isika ka:
- hampiharina sy hamafisina ny ady amin'ny kolikoly eny anivon’ny sehatra rehetra indrindra amin’ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana.
- hatsaraina ny fanabeazana, ny fampiarana ny lalàna sy ny fanamafisana ny fahitsina sy ny rafi-pitsarana.
Noho izany dia mitodika manokana amintsika tompon’Andraiki-panjakana isan-tsokajiny manerana ny Nosy aho ho fanatontosana ireo. Isika no hidin-trano miantoka ny alina sy vato hifaharana amin’izany ady amin’ny kolikoly izany.
 Novolavolaina ireo drafitra mahakasika ny fanatsarana ny rafi-pitsarana sy ny fitantanana ny fonja ho fanamafisana ny fampiharana ny lalàna hamerenana indray ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny fitsarana sy ny fanjakana.
Lany ny lalàna mametraka ny Fitsarana Avo na ny “Haute Cour de Justice”.
 Miroso amin’ny fitsinjaram-pahefana isika! Natolotra ary lany teny anivon’ny Antenimieram-pirenena ny lalàna fehizoro mifandraika amin’izany.
Hiezaka ny fitondrana foibe amin’ny fampitaovana sy fanofànana ary famatsiana samihafa satria manana adidy amin’izany izy.
 Mikasika ny fandaminana, ny fitantanana ary ny fanaraha-maso ny harem-pirenena sy ny tontolo iainana!
Tsy ny resaka andramena ihany, izay efa nanaovana fifanarahana amin’ny CITES sy ny Banky Iraisam-pirenena ary ny UNESCO no voakasik’izany.
Ao ihany koa ny harem-pirenena hafa toy ny “corail noir”, ny fasimainty, ny solitany, ny valan-javaboahary ary ireo faritra arovana na antanety na anaty rano.
Natao ireo ho tombotsoan’ny vahoaka Malagasy.
 Tsy maintsy tohizana ny ady amin’ny fahantrana!
Miankina amin’ny fampananan’asa sy ny fampitomboana ny fahefa-mividin’ny vahoaka izany.
Nohatsaraina noho izany ny lalana hanamorana ny fivezivezen’ny olona sy ny vokatra.
Namboarina ireo lalam-pirenena faha-roa, faha-efatra, fahaenina, faha-fito, faha-sivy, faha-iraika amby telo-polo izay simban’ ny rivo-doza nifanesy.
Manoloana ny olana nandritra ny taona maro amin’ny famatsiana herin’aratra dia manana ny paik’ady hametrahana vahaolana maharitra isika. Izany dia hiarahana amin’ny Banky iraisam-pirenena sy ny sehatra tsy miankina hanarenana ny fitantanana.
Tsy azo hodian-tsy hita ny ezaka maro hampihenana ny fahatapanjiro.
Teo ny fametrahana milina vaovao famokarana herin’aratra miisa enina ambitelopolo tamin’ny distrika maro.
Teo koa ny fanamboarana ny toha-dranon’Anjiajia ho famatsiana herin’aratra ny faritr’i Betsiboka.
Santionany amin’ny fohy ezaka ireo.
Teo ihany koa ny fampiroborobona ny eny ambanivohitra mba ampitombona ny velaran-tany sy ny tahampamokarana, indrindra ny fanamafisana ny famokaram-bary antoky ny fiahina sy ny fanjarin-tsakafo.
Nisy ireo tohadrano naorina nahafahana namatsy velarantany midadasika toy ny tao amin’ny distrikan’Andapa.
Natomboka ny asa fifehezana sy fitarihan-drano ao Bevoay ao amin’ny lemak’i Mangoky.
Tsy natao ambaninjavatra ny fanohizana ny asa ao Ambatondrazaka izay iarahantsika hatrany amin’ireo mpiara-miombon’antoka.
Zava-dehibe amin’ny ezaka famoronana asa ny fananantsika ny didim-panjakana fampiharana ny lalàna mikasika ny orinasa hafaka haba, indrindra manoloana ny fiverenantsika amin’ny AGOA.
Nohatsaraina ny sandambidin'ny harena ankibontanintsika izay noezahana ifanaraka amin’ny tsenambarotra iraisampirenena.
Niroso isika amin’ny fampiasana tekinôlojia avolenta eny amin’ny fadin-tseranana mba hanamorana ary hanarahamaso ny fanondranana sy fanafarana entana. Izany dia tafiditra amin’ny ezaka ho fanatsarana ny fampidiram-bolan’ny fanjakana.
Ho fanatsarana ny fitantanana sy ho fanarahamaso ny tetibola sy ny volam-panjakana, ny fandraraharana sy ny fihariana dia natsangantsika ny Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF).
Ireo rehetra ireo dia ho fampiroborobona ny seha-pihariana sy ny fampiasambola ary ny fandrarahana.
An’arivony ny orinasa nitsangana ka aman-jatony ny indostria amin’izany ary ampolony no orinasa afaka haba.
Koa satria ny vahoaka salama no afaka mihary sy mamokatra dia:
Toeram-pitsaboana fototra sy trano fandidiana maro no nosokafana, nohavaozina sy nampitaovana ary novatsiana fanafody. Indrindra any amin’ireo toerana saro-dalana ;
Mpitsabo voahofana maro no napetraka manerana ny Nosy;
Ankoatra ireo dia maro ireo ezaka hafa ho fanatsarana ny fitsaboana ny vahoaka toy :
- ny fandidiana maimaimpoana ataon’ny mpilatsaka antsitrapo ao amin’ny sambo Mercy Ships mandritra ny valo volana, ary efa ananana toky sahady fa mbola hitohy izany;
- ny fitsaboana ny nify sy ny aty vava eny anivon’ny hôpitalim-panjakana rehetra.
- ny fampihenana ny taha-pahafatesan’ny reny sy ny zaza (CARMMA) amin’ny alalan’ny fanohizana ny fanaovam-bakisiny faobe.
Nisy ny fepetra fampahafantarana sy fisorohana ary fitsabona ny aretina pesta.
Napetraka ihany koa ny tetika sy ny rafitra ahafahana miaro ny fidiran’ny aretina Ebola eto amin’ny Firenena.
 Ny tanora no antoky ny ho avy! Maro noho izany ny fepetra noraisinana ho fanarenana ny tontolon’ny fampianarana sy ny fanofanana arak’asa:
Naverina an-tsekoly ireo ankizy voatery nitsoaka andaharana nohon’ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny, indrindra nandritra ny krizy;
Nampidirana mpiasam-panjakàna ireo mpanabe FRAM nahafeno ny fepetra, ary mbola hiampy ny isa’izy ireo amin’ity taona ity.
Nofanina ireo tanora sy mpampianatra anarivorivony tany amin’ny faritra maro.
Mitohy ny fanokafana ivontoeranam-pampianarana manerana ny lafy valo sy ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina.
Nomena rano fisotro madio ny vahoaka ary nohatsaraina ny tontolo manodidina tamin’ny alalan’ny
fanentanana sy ny fametrahana fotodrafitrasa:
- Fanamboarana siniben-drano, lava-drano, loharano maro manerana ny Nosy;
- Fanentanana maro hamoizan’ireo izay mbola manao izany, ny fanaovana maloto eny an-kalamanjana;
- Fananganana trano fidiovana sy fivoahana aman-jatony maro.
 Nomena lanja manokana ny fanarenana ny toe-piainan’ny Malagasy indrindra ireo tena sahirana.
Nampiana ara-pitaovana sy ara-tsakafo ireo marefo ary nomena fanampiana ireo tra-boina nohon’ny loza na ny voajanahary na ny tsia.
Nohamafisina ny zon’ny isan-tsokajin’olona sy ho fisitrahany izany ka napetraka ireo ivontoerana fanoroana hevitra indrindra ho an’ny vehivavy;
Eo ampamolavolana ny pôlitika-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy isika mba hanoizana ny fanomezana ny vatsin’ankohonana sy ny araton’aina ho an’izay rehetra mila izany.
 Andriamatoa Filoha,
Betsaka ny asa vita ary santionany no voalaza satria ny fotoana manam-petra.
Nandritra izay valo volana niasan’ny Governemanta izay dia azo lazaina ho niompana tamin’ny fametrahana ny fototry ny fampandrosoana maharitra isika.
Mbola maro ny asa miandry ary tsy maintsy ho efaina toy:
- ny fanohizana ny asa fampandrosona sy ny ady
- ny fanajàna ny zon’olombelona,
- ny fametrahana ny fitsijaram-pahefana isan-tsokajiny ary ny fikatsahana ny tombotsoan’ ny vahoaka Malagasy ao anatin’ny fitondrana tsara tantana sy tandalàna.
Mamela ahy ianareo hisaotra manokana ny Mpiaramiombona antoka amintsika tamin’ny fiaraha-miasa sy ny fanampiana ny sehatra maro ka nahavitana ny asa voatanisa teo na ny tsia.
Mesdames et Messieurs du Corps Diplomatique, du Système des Nations-Unies et des Institutions
internationales, Quelqu’un l’a dit dans les années 2008 : « L’amitié, c’est ce qui vient au cœur quand on réussit ensemble des choses belles et difficiles ».
Nous venons de réussir ensemble des choses belles et difficiles ces deux dernières années.
Alors tout simplement merci de tout cœur.
Andriamatoa Filoha mivady!
Tsy mora ny manao zavatra! Nisy ny olana samihafa nosedraina nandritra ny fanatanterahana ny asa ka mety tsy nahatongalafatra izany.
Kanefa afaka mahatoky ianao, Andriamatoa Filoha, fa vonana hatrany ny tenako handray ny fepetra rehetra ilaina ho an’ny fanatsarana.
Eto ampamaranana, satria zava-dehibe amin’ny Malagasy ny fambolem-bary manaraka ny volovary maroanaka (SRI) dia :
Enga anie ianareo mandritra ity taona dimy ambinifolo sy roarivo ity ity, ho toy ny vary eny andoharano, tarafin’ny andro tsy mba malazo, rarafam-panala nefa tsy ngoly, tsofin’ny rivotra tsy mba miraika, fa tena raitra, tsy isaraka amin’ny sambatra sy ny manan-jara. Ho Masoandro hatrany ho an’i Madagasikara.